चियाको चर्चा : RajdhaniDaily.com -
उमेश रेग्मी - February 9, 2021 0
उमेश रेग्मी - February 8, 2021 0
उमेश रेग्मी - January 28, 2021 0
उमेश रेग्मी - January 26, 2021 0
उमेश रेग्मी - April 10, 2021 0
Home सौजन्य चियाको चर्चा
‘चिया खान आउने होइन ?’, श्रीमतीले बोलाइन सधैंझैं भान्छाबाट । हरेक दिन धेरैपल्ट सुनिने यो प्रश्न । आज अलि अनौठो लाग्दै थियो । ‘पिउने कुरालाई पनि खान बोलाउँदै छिन्,’ यस्तै सोच्दै लम्कें भान्छाकोठातिर ।
‘चिया पिउने हो नि बुढी, खाने कहाँ हो त ?’, मैले उनको वाक्य सुधार्न खोजें ।
‘खाए पनि, पिए पनि जाने पेटमा नै हो,’ उनको सटिक जवाफले मलाई चुप बनाइदियो । त्यसैबेला मेरा मित्र आइपुग्यो ‘नमस्ते’ गर्दै ।
‘भाउजु एककप चिया खाउँ न,’ उसले कुर्सीमा टुसुक्क बस्दै आफ्नै घरझैं फर्माइस तेस्र्यायो, उसकी ‘भाउजु’ याने कि मेरी श्रीमतीलाई । उसले पनि चिया खाने नै कुरा ग-यो । मलाई चित्त बुझेन ।
‘मित्र चिया त पिउने हो नि कहाँ खाने भनिरहेको ?’ ऊ एकैछिन अकमकायो । केही सोचेजस्तो गरे अनि बोल्यो, ‘चिया खाने भन्ने बानी लागिसक्यो, पिउने
भन्न त आउँदो रहेनछ । फेरि जे भने पनि सुन्नेले बुझे भइहाल्यो नि मित्र ।’
उसको कुरासँग म सहमत हुन सकिनँ, ‘सुन्नेले बुझ्ने अनि त्यहीअनुरुप कार्य गर्ने भए त के के भइसक्थ्यो यो मुलुकमा । सुनेर बुझ पचाउनेको मात्रा धेरै भएको ठाउँमा बोल्दाखेरि नै शुद्ध र प्रस्ट बोले पो त † जाबो एउटा चिया पिउने कुरा त सही भन्न नसक्ने जमात भएको हाम्रो समाजमा ठुलो कुराको के अपेक्षा राख्नु ?’
धेरै कुरा एकपछि अर्को गर्दै आउन थाले मनमा तर मैले केही भनिनँ । एकैछिन आएको मित्रलाई आफ्ना कुराले किन खिन्न बनाउनु ? भन्ने लाग्यो ।
मित्रले चिया सकाएपश्चात ‘अफिस जान ढिलो भयो’ भन्दै बिदा लियो । म पनि अफिस जाने तयारी गर्न लागें ।
दुई महिनाअघि बढोत्तरी पाएर हाकिम भएको मेरो शान नै फरक भएको थियो अफिसमा । पुग्नेबित्तिकै पियनले चिया सोध्नेक्रमबाट अफिसको कार्य आरम्भ हुने गथ्र्यो । ‘चिया खाने हैन त सर, लेराउँ ?’ सदाझैं पियनले आफ्नो टाउको हल्लाउँदै सोध्यो । म कुर्सीमा बस्न भ्याएको पनि थिइनँ ।
‘यो पनि चिया खाने कुरा गर्छ ! लेराइज एककप ।’ आफ्नो बिहानदेखिको दिक्दारी सहदै चिया मगाएँ । चियाको पर्खाइमा टेबलमा छरपस्टिएका फाइल मिलाउन थालें ।
अफिसमा समान ओहोदामा काम गर्ने मित्र आए, फाइल बोक्दै मेरो कोठामा ।
‘ओ हो सरले चिया खान लाग्नुभएको रहेछ । मैले आज व्यस्त भएर खान नै पाएको छैन । ए कान्छा, मलाई पनि एककप चिया लेरा त । कस्तो तलतल लागि सक्यो,’ एकै सासमा सबै भन्न भ्याए, मित्रले । म सोच्न थालें, ‘चिया खानेमात्र नभएर यसको तलतल पनि लाग्दोरहेछ । होइन चिया त चिया नभएर एउटा नशा नै पो रहेछ ।’
उनलाई भन्न मन लागेन चिया त पिउने हो खाने होइन भनेर, म शायद बिहानदेखि त्यही कुरा दोहो¥याउँदा दोहो¥याउँदा वाक्क भइसकेको थिएँ ।
हामी दुई चियाको चुस्कीसँगै फाइलको काम सकाउनतिर लाग्यौं । फोनको घन्टी बज्यो, ‘सरलाई निम्तो आयो त ?’ पार्टी कार्यकर्ताको चिरपरिचित स्वरले खै के निम्तोको कुरा गर्दै थियो, मैले बुझिनँ । सोधें उसलाई, ‘के को निम्तो अनि कहाँबाट हो कार्यकर्ताज्यू ?’ फोनको अर्को पट्टिबाट उत्तर आयो, ‘नेताज्यूको निवासमा चिया पार्टी छ क्या भोलि, त्यसैले निम्तोको कुरा गरेको नि † निम्तो हात नपरेको भए पनि आउनुपर्छ है । नेताज्यूसँग बसेर चिया नखाएको पनि धेरै भइसक्यो ।’ फोन काटियो तर मचाहिँ फेरि ‘चिया खाने’ कुराले टाउकोमा हात समातेर धुन्मुनाउन थालें । यस्तो लाग्यो शब्दकोषमा ‘चिया पिउने’ होइन, ‘चिया खाने’ भनेर सच्याउँजस्तो । सँगै रहेका मित्र मेरो
हरकतबाट अचम्भित देखिन्थे ।
‘के भयो मित्र, कसको फोन अनि के को निम्ताको कुरा गरेको ?,’ उनले आफूलाई रोक्न सकेनन्, सोधिहाले आफ्नो कौतुहलता मेट्नु जो थियो ।
‘नेताज्यू कहाँ चिया पार्टी रे ! त्यसैको निम्तो । म त जान्नँ । राजनीतिक गफबाहेक हुने अरु केही होइन । चिया त बहानामात्र हो, त्यहाँ कसलाई कसरी लडाउने र कसलाई पछार्ने ? भन्नेबाहेक अरु कुरा हुने होइन । सबै आफ्नै स्वार्थसिद्ध गर्ने धुनमा हुन्छन्, हामी गएर के गर्नु ? फेरि त्यही एककप चिया लिन पनि घन्टौं कुर्नुपर्छ । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो, देशमा यत्रायत्रा समस्या अनि काण्डमाथि काण्ड घटिरहेछन्, त्यसको निवारण गर्नु त कता हो कता ? चिया पार्टी गर्दै ‘वाह वाह’ बटुल्नुपर्ने । त्यस्तो ‘वाह वाह’ चाहिन्थ्यो त नाचघरमा गएर कम्मर हल्लाएको भए हुन्थ्यो, दर्शकले ताली पनि बजाउँथे अनि आफ्नो इज्जत पनि ज्यूकात्यू रहन्थ्यो । संसारले थुक्न थालिसके, उसलाई चाहिँ चिया पार्टी गर्दै ठीक्क छ, फेरि त्यो पनि सरकारी पैसामा ।’ म रोकिएँ ।
मित्रले भने, ‘यस्तै हो सर, यो देशको अवस्था, हाम्रा नेता अनि सधैं उनीहरूलाई नै जिताउने हामी । यस्ता कुरा जति गरे पनि सकिँदैन । जाउँ घर बरु पाँच पनि बजिसक्यो ।’
हामी दुवै निस्कियौं अफिसबाट । मित्र आफ्नो बाटो लागे । म घर फर्किन ट्याम्पो कुर्न थालें ।
‘ओ हो बन्धु † निकैपछि भेट भयो नि त, कता हो आजभोलि ?’, एउटा चिरपरिचित अनुहार मसामु आएर उभियो । मैले ‘नमस्ते’ टक्र्याएँ र घर जान ट्याम्पो कुरिरहेको वृतान्त सुनाएँ ।
‘यत्रो समयपछि भेट भएको छ, यसो चियासिया खान जाउँ अनि त्यतै बात मारुला,’ उनको यस्तो आग्रह मैले ‘नाइँ’ भन्न सकिनँ । मनमनै सोचें, ‘यिनले चाहिँ कुरा ठीक गरे है, चिया त पिउने नै हो तर सियाचाहिँ खाने होला शायद तर यिनको सियाचाहिँ के होला ?’ सोध्न मन लागे पनि हिम्मत जुटेन । मान्छेपिच्छे फरक
हुन्छन्, आजभोलि चियासँग आउने सियाहरू † उनले नजिकैको रेस्टुराँमा लगे मलाई र सोधे, ‘के पिउने ?’
‘आहा † बल्ल सही मान्छे भेटियो, यिनले चिया खाने भनेन,’ मनमनै सोच्दै मैले आफ्नो फर्माइस गरें, ‘एकएक कप चिया पिउन त दाइ ।’
‘यतिखेर के को चिया ? मत यसो सियातिर लागौं कि भन्ठानेको,’ मुसुक्क हाँस्दै उनले दुई बोतल बियर मगाए । मैले उनको ‘चियासिया’मा सियाको अर्थ बुझें । उनको हरेक साँझ यस्तै चियासियामा बित्नेरहेछ भन्ने कुरा उनीसँगको छोटो बसाइमै प्रस्टियो । हरेक औसत जागिरेको जीवन कहानीझैं उनले आफ्नो कहानी प्रस्तुत गरे बियरको घुट्कोसँगै ।
बियर सकियो । हामी छुटियौं । ट्याम्पो चढेर म घरतिर लागें । श्रीमती सधंैझैं हातमा चिया लिएर कुरिरहेकी रहिछिन् तर मैले चिया खाइनँ ।
उमेश रेग्मी -
इलाम । त्रिसट्ठी वर्षीया सौतेनी आमालाई बलात्कार गर्ने इलामका २३ वर्षीय एक पुरुषलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र इङ्गनामको इजलासले...
खेल उमेश रेग्मी - August 6, 2020 0
प्रदेश १ उमेश रेग्मी - February 15, 2021 0
भर्खरै उमेश रेग्मी - April 3, 2020 0
अर्थ उमेश रेग्मी - October 21, 2020 0
Exclusive उमेश रेग्मी - December 31, 2020 0
Editor-Picks उमेश रेग्मी - February 24, 2020 0
अर्थ उमेश रेग्मी - February 19, 2020 0
प्रदेश ५ उमेश रेग्मी - September 30, 2020 0
Breaking News उमेश रेग्मी - December 15, 2020 0
उमेश रेग्मी - September 10, 2020
उमेश रेग्मी - March 5, 2020
उमेश रेग्मी - December 19, 2019
उमेश रेग्मी - December 18, 2019